मिसनमा जाने सैनिकको तलब बढ्यो, अब कति पाउँछन् ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार मिसनमा जाने सैनिकको तलब बढ्यो, अब कति पाउँछन् ?
मिसनमा जाने सैनिकको तलब बढ्यो, अब कति पाउँछन् ?
२०७६, १ आश्विन बुधबार ०९:२०
नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुन जाने सैनिकको भत्ता बढाएको छ । तल्ला तहका सिपाहीसहित अधिकृतहरूबाट गुनासो आएपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सकल दर्जाको गुनासो सुनुवाइ गर्दै मिसनमा सहभागी हुने सैनिकको भत्ता बढाउने निर्णय गरेका हुन् । थापाको अध्यक्षतामा सोमबार सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रतिव्यक्ति तलबमा ८५ अमेरिकी डलर (करिब ९ हजार पाँच सय रुपैयाँ) थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्रतिमहिना १ हजार २९ अमेरिकी डलर पाउँदै आएकोमा अब शान्ति सेनामा सहभागी सैनिकले ८५ डलर थप गरी प्रतिमहिना १ हजार ११४ अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन् । सो रकम नेपाली रुपैयाँ १ लाख २७ हजार बराबर हुन आउँछ ।
बैठकले मिसनमा गणको नेतृत्व गर्ने गणपति प्रमुख सेनानीको समेत तलब बढाएको छ । प्रमुख सेनानीले प्राप्त गर्ने गरेको १ हजार ३ सय ७८ अमेरिकी डलर भत्तामा २१ डलर थप गरी १ हजार ३९९ पु¥याइएको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बढेको भत्ता आगामी १४ असोज (१ अक्टुबर)देखि लागू हुने जानकारी दिए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
Previous articleबिरामीको मृत्यु भइसक्यो, पेटमा प्वाल पार्ने झाँक्रीविरुद्ध प्रहरीले उजुरी लिन मानेन
Next articleभैंसीगोठमा प्रहरी, सुरक्षा कसरी ?